Ungasikhulula njani indawo kuGoogle Drayivu | I-Androidsis
Uyikhulula njani indawo kwiakhawunti yakho kaGoogle Drayivu
UEder Ferreño | | Tutorials
Uninzi lwabasebenzisi be-Android basebenzisa iakhawunti kaGoogle (ehambelana neakhawunti ye-Gmail). Siyabulela oku, sinokufikelela kwizixhobo ezahlukeneyo, phakathi kwayo sifumana iGoogle Drayivu. Ilifu likaGoogle lisivumela ukuba sigcine iifayile ngendlela elula, ukuze singalahli nto nangaliphi na ixesha. Nangona kunjalo, kunokwenzeka ukuba ngaxa lithile siphelelwe yindawo. Ke kufuneka sikhulule indawo.
I-Google Drayivu isinika i-15 GB yokugcina ngokukhululekileyo. Ingabonakala ngathi ininzi, nangona ulisebenzisa rhoqo ilifu, baphela besilela ngamanye amaxesha. Ke ngoko, lixesha lokuba ukhulule indawo. Kwaye ngenxa yoko, sineendlela ezininzi zokufumana indawo eyongezelelweyo.
Nangona, ngaphambi kokuqala kufuneka sijonge indawo esinayo simahla. Kuqhelekile kuthi ukubona isaziso kwiGmail okanye kuGoogle Drayivu xa siqala ukuphuma endaweni. Kodwa kwezinye iimeko, de sifike kwinqanaba apho singenasithuba khona, ixesha alikho. Ke ngoko, okokuqala kubalulekile ukujonga ukuba singakanani indawo esinayo simahla. Ukusukela ngale ndlela sinokugqiba ngendlela ebhetele, ekufuneka sikwenzile ukukhulula indawo.
1 Yintoni ebandakanyiweyo kuGoogle Drayivu?
2 Cima ii-imeyile kwiGmail
3 Cima iifayile kwiGoogle Drayivu
4 Iifoto zeGoogle
Yintoni ebandakanyiweyo kuGoogle Drayivu?
Umbuzo oqhelekileyo phakathi kwabasebenzisi ngulo yintoni ethathelwa ingqalelo ukufumanisa ukuba indawo igcwele. Kuba kukho izinto ezininzi eziqwalaselwa nguGoogle Drayivu ukumisela indawo esinayo simahla. Nantsi into ethathelwa ingqalelo:
Zonke ii-imeyile esinazo kwi-Gmail
Zonke iifayile esizilayisha kwiDrayivu
Zonke iifoto esinazo kwiifoto zikaGoogle
Ezi zizinto ezidlala indima kule meko. Ke kufuneka sibalawule kakuhle.. Kwaye kulapho kufuneka siqwalasele ukuba ngaba kunokwenzeka ukuba sikhulule indawo kwiakhawunti kaGoogle esinayo. Sinazo, njengoko ubona, iindlela ezininzi ezikhoyo.
Cima ii-imeyile kwiGmail
Indlela elula yokuqala kukuya kwiakhawunti yethu yeGmail. Eyona nto inokwenzeka, sinemiyalezo emininzi kwi-inbox yethu, uninzi lwayo ludala okanye alusebenzisi kuthi. Kuya kufuneka siqale ngokususa ezo imeyile zingasasebenziyo kuthi. Kuba konke abakwenzayo kukuhlala ngokungenamsebenzi kule akhawunti yeGoogle Drayivu.
Ngenxa yoko, kufuneka susa imiyalezo kwintengiso okanye kwifolda yentlalo kuqala, ezizezona zihlala zingenaxabiso kakhulu kuthi. Ukongeza, sinokujonga kwii-imeyile ezindala, ukusuka kwiminyaka eyadlulayo, ukubona ukuba ngaba zikhona ezisincedayo okanye ukuba singazicima.
Enye indlela kukususa loo miyalezo inobunzima obungaphezulu, kuba ine-attachment. Singazihluza ngendlela elula. Kwibhokisi yokukhangela kwi-Gmail, nokuba sisixhobo okanye ikhompyuter, kufuneka singenise lo mbhalo: une: attachment enkulu: 10M. Iya kusinceda ekucoceni ii-imeyile ezinkulu kune-10 MB.
Cima iifayile kwiGoogle Drayivu
Nje ukuba sikwenze oku, Kuya kufuneka sijonge oko sikugcinileyo kuGoogle Drayivu. Kunokubakho amaxwebhu amaninzi okanye iifayile ezingasasebenziyo kuthi kwakhona. Into emnandi ngelifu kukuba singazilungelelanisa ngokobunzima. Ke, ngendlela elula kakhulu siya kuba nakho ukubona ukuba zeziphi iifayile ezinobunzima kakhulu. Kwaye siyabona ukuba phakathi kwabo kukho ezinye esinokuthi sizisuse. Nangona kufuneka uqaphele.
Kuba kunokwenzeka ukuba sinee-backups ezigcinwe efini. Akufuneki sizicime ezi kopi, kuba siza kuphulukana nolwazi olubaluleke kakhulu, into esingafuni ukuba yenzeke phantsi kwazo naziphi na iimeko.
Kwimeko yeefoto zikaGoogle, sinako ukuyikhulula indawo yeakhawunti ngaphandle kokucima nantoni na. Imalunga nokugcina iifoto kwisicelo kumgangatho wazo ophezulu, ukuze zingasebenzisi sithuba kwiGoogle Drayivu. Ukwenza oku, kuya kufuneka siye kuseto lweefoto zikaGoogle, onokuthi undwendwele kuzo eli khonkco.
Apho Ufumana iqhosha elithi "buyisa indawo yokugcina". Sinqakraza kuyo kwaye iifoto ziya kulungiswa, kwaye asiyi kulahlekelwa nantoni na kule meko. Ngale ndlela, ithatha indawo encinci. Icebo elilula ngokwenene, kwaye sinokulenza xa sineefoto ezininzi kwisicelo. Kukule meko xa sifumana okuninzi kuyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Tutorials » Uyikhulula njani indawo kwiakhawunti yakho kaGoogle Drayivu
Ngoku kunokwenzeka ukukhuphela i-Fortnite ngaphandle kwesimemo
Uwaphawula njani amagama abhalwe ngqindilili, akekelise, uqhankqalazo okanye ubekwe kwindawo enye kuWhatsApp